आईपिएलमा दिल्लीले एक खेल नखेलाएपनि मोटो रकम लिएर बिग ब्यास खेल्दै सन्दिप लामिछाने | TajaKhabarTV
के अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मेस्सी भन्दा रोनाल्डो सफल भन्ने एक सत्य हो त ?
ओलम्पिक फुटबलमा किन यू–२३ टिम खेलाइन्छ ? कारण थाह पाउँदा चकित पर्नु हुनेछ
नो रोनाल्डो नो मेसि ! यी हुन् टोकियो ओलम्पिक फुटबलमा देखिने १० ठुला स्टारहरु
यी हुन् टोकियो ओलम्पिककी सबैभन्दा कान्छी खेलाडी, गर्न सक्छिन् चमत्कार
आईपिएलमा दिल्लीले एक खेल नखेलाएपनि मोटो रकम लिएर बिग ब्यास खेल्दै सन्दिप लामिछाने
२०७७, ३ मंसिर बुधबार १३:५१ November 18, 2020 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । नेपाली युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले यस सिजनको बिग ब्यास लिग (बिबीएल) टी२० क्रिकेटमा मोटो रकम लिएर होबार्ट हुरिकेन्सबाट खेल्ने सम्भावना रहेको छ । सन्दीपले यसअघिका दुई सिजन मेलबर्न स्टार्सबाट खेलेका थिए । यस सिजनका लागि स्टार्सले सन्दीपलाई रिटेन गरेको छैन र सन्दीपले नयाँ टिमबाटै लिग खेल्ने पक्का नै छ । तर कुन टिमबाट खेल्ने अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ ।
लंका प्रिमियर लिग खेल्न भारतलाई बिश्वकप जिताउने यी दुई खेलाडीले लिए सन्यास
सन्दिपलाई एक खेल पनि नखेलाउन दिल्लीले अन्ततः भन्यो : ‘धन्यवाद सन्दिप’
किङ स्मिथले दिए भारतिय बलरहरुलाई चेतावनी, भन्छन् : ‘ कमजोर भारतिय बलरहरु देखि कोहि डराउदैनन् ‘
लकडाउनकै कारण डेलिभरी ब्वई बने यी फास्ट बलर, भावुक हुदै यस्तो भने …
आईपिएलमा फ्लप भएपछि धोनीले सुरु गरे कुखुरा पालन
सन्दिप लामिछानेले आफ्ना दिदिहरुसँग यसरी लगाए भाईटिका ( हेर्नुस फोटोहरु )
इङ्लिश टिमले पाकिस्तानलाई दियो ठुलो झड्का, अब के हुन्छ ?
अष्ट्रेलियन अनलाइन क्रिकेट डट कम डट एयु ले सन्दीपको नाम होबार्टसंग जोडिएको जनाएको छ । होबर्टमा उनि कति रकममा जान लागेको स्पष्ट जानकारी त छैन तर यसपटक उनले मंहगो रकम पाउने अनुमान गरिएको छ । स्टार्सले अफगानिस्तानका जाहिर खानलाई तेस्रो विदेशी खेलाडीको रुपमा अनुबन्ध गरेको हो । यसअघि जोनी बेयर्स्टोव र निकोलस पुरनलाई स्टार्सले अनुबन्ध गरिसकेको छ । यस सिजन बीबीएलमा हरेक टिमले तीन विदेशी खेलाडी एकै पटक खेलाउन पाउने नयाँ नियम रहेको छ ।
उता होबार्ट भने अफगानिस्तानका अर्का स्पीनर क्वाइस अहेमदको विकल्प खोज्दैछ । क्वाइस यस सिजन बीबीएलमा उपलब्ध हुने छैनन् । ‘सन्दीप होबर्टसँग जोडिएका छन् । होबर्ट केइस अहमेदलाई बिस्थापित गर्त स्पिनर खोजिरहेको छ । जो यस बीबीएलमा उपलब्ध हुने छैनन्,’ क्रिकेट अष्ट्रेलियाले आफ्नो वेबसाइटमा लेखेको छ । यस अघि डेलीमेलले समेत सन्दीपले होबार्टबाट खेल्ने बताएको थियो । सन्दीपका व्यवस्थापकमा रुपमा रहेका रमन शिवाकोटीले यसअघि नै सन्दीपले नयाँ टिमबाट बीबीएल खेल्ने बताएका थिए ।
सन्दीपको पूर्व टोली स्टार्सले तीन विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरिसकेको हुनाले सन्दीपले खेल्ने नयाँ टिम होबार्ट हुने सम्भावना भएको हो । स्टार्सले अफगानिस्तानका जाहिर खानलाई तेस्रो विदेशी खेलाडीको रुपमा अनुबन्ध गरेको हो । यसअघि जोनी बेयर्स्टोव र निकोलस पुरनलाई स्टार्सले अनुबन्ध गरिसकेको छ । यस सिजन बीबीएलमा हरेक टिमले तीन विदेशी खेलाडी एकै पटक खेलाउन पाउने नयाँ नियम रहेको छ ।
उता होबार्ट भने अफगानिस्तानका अर्का स्पीनर काइस अहमदको विकल्प खोज्दैछ । काइस यस सिजन बीबीएलमा उपलब्ध हुने छैनन् । अस्ट्रेलियन क्रिकेट मिडियाले सन्दीपको नाम होबार्टसँग जोडिएको बताउँदै आएको छ । होबार्टले काइसको विकल्प खोजिरहेको हुनाले सन्दीपले उक्त टिमबाट मौका पाउन सक्ने सम्भावना छ । होबार्टले यस सिजनका लागि विदेशी खेलाडीको रुपमा इंग्ल्याण्डका डेविड मालान र वेष्ट इन्डिजका किमो पाउललाई अनुबन्ध गरिसकेको छ र आफ्नो अन्तिम विदेशी खेलाडी बिहीबार सार्वजनिक गर्दैछ । बीबीएल डिसेम्बर १० देखि शुरु हुँदैछ ।
बिग ब्यास लिग, सन्दिप लामिछाने
२०७८, ८ श्रावण शुक्रबार ०८:३१
सन्दीप लामिछाने बिना पनि ‘द हन्ड्रेड’मा ओभल इन्भिन्सिबल्स शानदार जित, चम्किए यी खेलाडी
२०७८, ८ श्रावण शुक्रबार ०८:११
आमिर अख्तरमाथि खनिए पारस खड्का ! भन्छन् : ‘झुटो आरोप लगाउदै आमिर अख्तरले मेरो बदनाम गर्न खोजे’
२०७८, ७ श्रावण बिहीबार १७:०६
‘द हन्ड्रेड’ खेल्न बेलायत पुगेका सन्दीप खेल्न नपाएपछि रित्तो हात नेपाल फर्किए
२०७८, ८ श्रावण शुक्रबार २३:०९
२०७८, ८ श्रावण शुक्रबार २२:३९
२०७८, ८ श्रावण शुक्रबार २२:२४
२०७८, ८ श्रावण शुक्रबार २०:०७
२१ बर्षिय सान्चो बने मंहगो खेलाडी, उनलाई म्यानचेस्टर युनाइटेडले दिएको रकम थाह पाउँदा सबै चकित
२०७८, ८ श्रावण शुक्रबार २०:०४